Maxay Ku Kala Duwan Yihiin Dowladdii Xasan Sheekh iyo Tan Farmaajo Hogaamiyo? – Radio Daljir
Maxay Ku Kala Duwan Yihiin Dowladdii Xasan Sheekh iyo Tan Farmaajo Hogaamiyo?
Juunyo 21, 2017 9:03 b 0
Waxaa dalka Somalia kasoo arrimiyay dowlado dhowr ah oo midba mida ka danbeysa ka wanaagsaneyd marka la’eego isbedelada dhanka Siyaasada, Amniga iyo Xiriirka Caalamiga ah.
Dowladii uu Hogaaminaayay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diirada saari jirtay dhinacyada Siyaasada iyo Xiriirka Caalamiga, waxaana jiray guux ay isla dhexmarayeen shacabka Soomaaliyeed oo muujinaayay in dowlada Xasan Sheekh ay ka gaabin jirtay dhanka Amaanka.
Dowladii dhacday ee Xasan Sheekh ayaan isbedel muuqda ku sameyn dhanka amniga, markii laga reebo isbedelo dhanka Madaxda Hay’adaha amniga oo ahaa mid is xigxigay.
Dowladii Xasan Sheekh ayaa inta badan kusoo koobatay magaalada Muqdisho oo ay ka dhacayeen falal amni darro oo isugu jira Qaraxyo iyo dilal xad dhaaf ahaa oo loo geysan jiray dadka shacabka ah qeybahooda kala duwan.
Waxyaabihii laga bartay dowladii uu wakhtigeedu dhamaaday ee Xasan Sheekh ayaa waxaa kamid ahaa Shabaab waan ciribtirnay, Dadka ayay nolosha u diidan yihiin, Waan ku daba jirnaa iyo Baaritaano aan markaa laheyn natiijo.
Dowladu waxa ay xiligaa aheyd mid garwaaqsan in dalka uu ka jiro amni darro, u muuqatay mid dhaqaale looga raadin jiray dowladaha reer Galbeedka oo iyagu ahaan kuwa aad u daneynaayay in Somalia ay kusii dhacdo boholo mugdi ah oo aan ka qabasho laheyn.
Waxaa intaa usii dheereyd jarista waddooyinka muhiimka u ahaa dadka shacabka, iyadoo dhagaha Bulshada lagu dhibcin jiray in dowladu ay wado dadaalo looga hortagaayo Maleeshiyaadka falalka gurcan u geysan jiray dadka shacabka ah.
Waxyaabihii ugu darnaa ee gilgilay quluubta dadka shacabka ah ayaa waxaa kamid ahaa:
1: ­Weeraro aan nusqaan laheyn oo lagu qaadi jiray Xarumaha Dowlada iyo Hoteelada ay ku caweyn jireen Madaxda dalka.
2: ­Weeraro lagu geysan jiray gaadiid raaxo isla markaana lala eegan jiray Madaxda qeybahooda kala duwan.
3­: Ciidamada dowlada oo is laheysiiya waddooyinka isla markaana awood u isticmaala dadka shacabka ahaa ee la sugaayay in loo arxan falo.
MAXAY KAGA DUWAN TAHAY DOWLADA FARMAAJO?
Madaxweynaha Somalia ee la doortay 8 Feb, 2017, ayaa isbedel ku sameeyay dhanka Hay’adaha amaanka iyo dhammaan Hay’adaha kale ee dowlada iyadoo meesha laga saarayo cabashooyinka ay shacabka ka muujinayeen sida ay u shaqeyneysay dowladii hore.
Dowlada Farmaajo oo aan sano jirsan ayaa lagu amaanaa inay waxbadan ka bedeshay Amni dariga, Siyaasada iyo mida caalamiga ah.
Dowlada Farmaajo ayaa markii la’eego dhanka Amaanka shabaheysa dowladii dhacday ee uu hogaaminaayay Xasan Sheekh waxaana kamid ah:
1­: Wadooyinka Muqdisho oo la kala jaray si ka duwan dowladii hore.
2: ­Hanjabaadaha joogtada ah ee loo jeedinaayo maleeshiyaadka Shabaab ee magaalada Muqdisho ka ciribtiraaya Shacabka aan waxba galabsan.
3­: Hal heeska Shabaab ayaan kula jirnaa dagaal waana ka hortagi doonaa weerarada.
MAXAY KU AMAANAN TAHAY DOWLADA FARMAAJO?
Dowlada Farmaajo ayaa waxabadan ka dheereysay dowladii hore waxaana kamid ah waxyaabaha lagu amaanayo:­
1­: Isbedelka dhanka Siyaasada.
2­: Xiriirka caalamka oo u muuqda mid ku socda xawaare.
3­: Amniga Muqdisho oo aad ugu wanaagsan sidii hore, inkasta oo weli uusan 100% ahayn.
4: ­Xuquuqda ciidamada oo ahmiyada koowaad lasiiyay.
5­: Daryeelka bulshada oo gaaray meel wanaagsan.
6: ­Iska warqabka Xukuumada oo ka sareeya halkii uu horay u taagnaa.
Si kastaba ha ahaatee, Dowlada uu Hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo ayaa looga fadhiyaa inay ka dhabeyso isbedelka ay kusoo gashay saaxada Siyaasada iyo in si dhaba loo fuliyo ballanqaadyada uu sameeyay Madaxweynaha dalka.
W/Q: Cabdi Xuseen Axmed
FIIRO GAAR: MAQAALKAAN WUXUU GAAR U YAHAY QORAHA KU SAXIIXAN KAMANA TARJUMAAYO WAKAALADA WARQAAD
Reer Guuraagii ugu Badnaa oo Buux Dhaafiyey Deegaanka Sallax (dhegayso)
Shiikh Xasan Bookh oo ka Hadlay Muhiimadda Barashada Quraanka Kariimka (dhegayso)